ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ဂျပန်မှာကျောင်းတက်မည် အပိုင်း ၁
Posted by ကြည်ကြည် at 9:07 AM
အမှန်အကန် အားရပါးရဖတ်သွားပါတယ်.ကျောင်းလည်းတက်ချင်ပါသည်.ANIMATION ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်.level2အောင်ထားပါတယ်.ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆဲပါ.level2လက်မှတ်ကြီး ဒိတ်အောက်သွားပြီး ဂျပန်စာတွေ မေ့သွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ်လှပါသည်.အကြံပေးများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဟုတ် အမလည်းရေးရင်း ပြင်ရင်းပါပဲ..
ဘေဘီ July 18, 2011 at 12:43 PM
ကြည်ရေ .... (ဗိုလ်ချုပ်လေသံနဲ့ ;P)
kokoseinygn July 19, 2011 at 3:11 AM
TOKYO တက္ကသိုလ်မှာ အောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး အကြောင်းသိချင်ပါတယ် စပ်စုတယ်ရယ်လို့ မအောင့်မေ့ပါနဲ့ နောင်လာနောင်သားတွေ အတုယူရအောင်လို့ပါ.... ဂျပန်မှာ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ များဂျပန်တွေတောင် တက်ဖို့ ခဲရင်းတဲ့ TOKYOတက္ကသိုလ်ကို အောင်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်မြန်မာ အချင်းချင်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်း)
'အများစုကတော့ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် ၁၂ တန်းလိုပါတယ်'
အဲဒါ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ ဟင် အစ်မ?
ပြီးတော့ university က ဘွဲ့ တစ်ခုရဖို့ အတွက် ဘယ်နှစ်နှစ် တက်ရပါသလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင်...
အပိုင်း ၂ ကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်...
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်
မဒမ်ကိုး July 26, 2011 at 11:43 PM
Anonymous July 28, 2011 at 7:03 AM
I have got many information.Its so helpful for me.
Kyaw Hnin Se Lwin September 5, 2011 at 5:04 PM